मीना घोरसाइने/काठमाडौँ, ६ फागुन । बाग्लुङकी करिष्मा थापाको विवाह १४ वर्षमै भयो । विवाहपछि उनका दुई छोरी भए ।
छोरी मात्र जन्माएका कारण परिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएकी थापा माइतीबाट समेत सहारा नपाए पछि अन्ततः एक साथीको सहयोगमा काठमाडौँमा आइपुगिन् ।
अध्ययन नभएकाले राम्रो जागिर पाउने सम्भावना नभएपछि साथीको सहयोगमार्फत उनले एक रोधीमा वेटरको रुपमा काम शुरु गरिन् । त्यहाँ काम गर्दागर्दै थापा दोहोरी सिकेर दोहोरी गायिका पनि भईन् ।
कामबाट राम्रै पारिश्रमिक आएपनि छोरीका लागि समय नभएपछि साथीको घरमा छोरी जिम्मा लगाएर काममा जान थालेकी उनले भनिन्, ‘हाम्रो कामकै कारण हाम्रो सन्तान समेत सुरक्षित छैनन् भने राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिने कहिले’ आफू मनोरञ्जन क्षेत्रको श्रमिक भएकै कारण आफ्ना छोरीसमेत सम्मानित नभएको उनको गुनासो थियो ।
नयाँ व्यक्तिले रोधी चलाउने भनेर उनिलगायत अन्य साथीलाई केही समयपछि पुनःबोलाउने बहानामा तीन महीनाको पारिश्रमिक समेत नदिइ पठाइयो । केही समयपछि रोधीका लगानीकर्ताले उनलाई उसैसँग बस्न भनी बोलायो तर उसको नियत ठिक नभएकाले थापाले इन्कार गरिन् । त्यो घटनाले उनलाई न त काममा बोलाइयो न त काम गरेबापतको पारिश्रमिक नै दिइयो । काममा बोलाउला भन्ने आशैआशमा थापाले अन्य ठाउँबाट आएको कामको प्रस्ताव समेत मानेकि थिइनन्।
उनले श्रम विभागमा आफूले काम गरेको पारिश्रमिक पाउन भनी मुद्दा समेत दायर गरेपनि अहिलेसम्म पारिश्रमिक अझै पाउन सकेकि छैनन् । ‘कि त हामीलाई कामको सुनिश्चितता चाहियो, होइन भने हाम्रो पारिश्रमिक समयमा नै दिनुपर्‍यो’, थापाको आक्रोस थियो । हाल उनि काठमाडौँकै एक रोधीमा काम गर्छिन् ।
त्यसैगरी पोखराको एक स्पामा काम गर्दै आएकी २४ वर्षीय शर्मिला श्रेष्ठ आफूले यस क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा आफूमाथि धेरै नै शोषण भएको बताईन् । एकातिर परिवारको आर्थिक समस्या अर्काे मासिक आठ हजार पारिश्रमिक मात्र । त्यसमाथि भनेको समयमा तलब नपाइने । अर्काे समस्या त समाजले आफूमाथि हेर्ने दृष्टिकोण पनि नराम्रो । स्पामा काम गर्ने केटी भन्नेवित्तिकै सबैले चरित्रहीन जस्तै व्यवहार गर्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।
श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘हामीलाई पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस सरहको सम्मानजनक व्यवहार कहिले गरिन्छ।’ चाहेर पनि आफू यस दलदलबाट निस्कन नसकेको उनको भनाइ थियो । विशेषगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई आर्थिक शोषण त छ नै अर्काेतिर उनीहरू यौन शोषणका शिकार पनि बनिरहेका छन् ।
बुटवलको एक रोधी घरमा काम गर्दै आएकी रमिला मोक्तानले आफू मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरेकै कारण कोठा पाउनसमेत गाह्रो हुने गरेको दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘बस्नको लागि कोठा भाडामा त पाइन्छ, तर राति अबेलासम्म काम गर्नुपर्ने हुँदा घरबेटीले ढोका नै खोलिदिँदैनन् ।’ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्नेवित्तिकै समाजको मात्र नभइ ग्राहकको समेत गलत नजर हुने गरेको उनले बताईन् ।
सरकारले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका लागि पनि अन्य काम गर्ने व्यक्ति सरह नै सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म सो व्यवहार नभएको उनीहरुको गुनासो थियो । रासस
‘हेरी फेरी-३’ बन्दै, मुख्य भूमिकामा को-को खेल्दैछन् ?
हलिउड अभिनेता इसाक क्यापीले गरे आत्महत्या
‘स्टुडेण्ट अफ दि इयर २’ को कमाइ कति ?
दर्शकले भने झुर फिल्म ‘स्टुडेण्ड अफ दि एयर २’
मकैबाट घर बसीबसी ‘यात्रा’ हेर्न पाइने
फानी पीडितका लागि अक्षय कुमारको १ करोड
सलमान खान र कैटरीना कैफको टाइगर जिंदा है को सीक्वल बन्ने
ऋषि कपुर ‘क्यान्सर फ्रि’
हृदयघातले ढलेका बिजु बज्र उठेनन्
फिल्म ‘कंलक’को कमाइ कति ?
सुटिङका क्रममा अभिनेता विक्की कौशल घाइते
बुबा बने आर्यन, म्यारिज एनिभर्सरी कै दिन पुत्रलाभ
चलचित्र ‘यात्रा’ का दर्शकले जिते एक लाख
फिल्म ‘कलंक’को पहिलो दिनको कमाइ कति ?
प्रियंका र दीपिका पछि यी बलिउड अभिनेत्री पनि हलिउडमा डेब्यु गर्दै